Top 15: Padmaavat oo 400 Crore soo xareeyay isku darka dibad iyo dal kaalinta 8-aad ayuu taagan yahay! – Filimside.net
Top 15: Padmaavat oo 400 Crore soo xareeyay isku darka dibad iyo dal kaalinta 8-aad ayuu taagan yahay!
February 6, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: February 6, 2018
Inaba caadi ma ahan filimka Padmaavat madaama ganacsi taariikhi ah sameenayo kana ma ahan filim Khaan hogaamiye ka yahay hadana mudo 12-maalmood 400 Crore ayuu kusoo xareeyay isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka (Worldwide Gross)!
Sidoo kale Padmaavat hada waa filimka 8-aad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo isku darka dibad iyo dal waxaana jirto fursad aan badneyn oo uu ganacsigiisa guud 500 Crore ku gaari karo.
Filimka Padmaavat ganacsiga ugu weyn wuxuu ka sameeyay suuqyada Koonfur Hindiya, Maharashtra, US / Canada iyo Australia wuxuuna halkaas ka sameenayaa ganacsiyo iskoor ku dheehan.
Dhinaca kale filimka Tiger Zinda Hai isagana bandhigiisa Boxoffice-ka dibad iyo dal wuu soo idlaanayaa wuxuuna ganacsigiisa guud ku istaagi doonaa 556 Crore (Worldwide Gross) isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Fadlan hoos kaga bogo 15-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka, waxayna BOI xisaabtay oo kaliya suuqyada muhiimka ah ee filimada Hindiga ah laga wada daawado ganacsiga laga sameeyay:
1. Bahubali – The Conclusion – 802 crore
2. Dangal – 702 crore
3. PK – 616 crore
4. Bajrangi Bhaijaan – 604 crore
5. Sultan – 577 crore
6. Tiger Zinda Hai – 555 crore
7. Dhoom 3 – 524 crore
8. Padmavati – 400 crore (Qiyaas ahaan)
9. Chennai Express – 396 crore
10. Dilwale – 372 crore
11. Prem Ratan Dhan Payo – 365 crore
12. Bajirao Mastani – 356 crore
13. Kick – 352 crore
14. 3 Idiots – 349 crore
15. Happy New Year – 342 crore
Waxaa Aqrisay 591